Amanoveli we-adventure amahle kakhulu
Ukubuyekezwa kwenoveli yokuzijabulisa
Izincwadi ezi-3 ezihamba phambili ze-adventure
Imvelaphi yezincwadi isuselwe ohlotsheni lwe-adventure. Lezo namuhla eziqashelwa njengezincwadi ezinkulu kunazo zonke zezincwadi zomhlaba wonke zisiyisa ohambweni oluya ezingozini eziyinkulungwane kanye nezinto ezitholwe ngokungasoleki. Ukusuka e-Ulysses kuya eDante noma kuDon Quixote. Futhi nokho namuhla uhlobo lwe-adventure ...
3 izincwadi ezinhle kakhulu zikaClive Cussler
Uma kukhona umbhali wamanje we-adventure osaphethe uhlobo lwe-adventure ngaphakathi kwabathengisa kakhulu, nguClive Cussler. NjengoJules Verne wanamuhla, lo mbhali usiholele ezikhungweni ezithokozisayo nge-adventure nemfihlakalo njengamathambo omgogodla. Iqiniso …
Izincwadi ezi-3 ezihamba phambili zika-Alberto Vázquez Figueroa
Uma ufuna ukugcina usesikhathini nokwakamuva okuvela ku-Alberto Vázquez Figueroa, uzohlala uyithola ivuselelwa ngokususelwa ekuhlolweni okuvelele kwabafundi LAPHA. Kimina, u-Alberto Vázquez-Figueroa wayengomunye walabo babhali besikhashana, ngomqondo wokuthi ngamfunda ngentshiseko njengombhali omkhulu we ...
Inhlekelele enkulu ephuzi, eyenziwe nguJJ Benítez
Bambalwa ababhali emhlabeni abenza umsebenzi wokubhala isikhala somlingo njengoba kwenza uJJ Benítez. Indawo ehlala umlobi nabafundi lapho iqiniso nenganekwane kwabelana ngamakamelo afinyelelekayo ngokhiye wencwadi ngayinye entsha. Phakathi komlingo nokumaketha, phakathi kokuphazamisa kanye ...
Ulimi lwezincwadi olufihliwe, luka-Alfonso del Río
Ngikhumbula uRuiz Zafón. Kwenzeka kimi njalo lapho ngithola inoveli ekhomba isici sezincwadi esoteric, ezilimini ezifihliwe, kulelo phunga lokuhlakanipha eliqoqwe emashalofini angapheli, mhlawumbe emathuneni amasha ezincwadi ... Futhi kuhle ukuthi kube njalo . Umcabango omkhulu wombhali waseCatalan ...
IVozdevieja, ngu-Elisa Victoria
Ngubani ongamkhumbuli uManolito Gafotas ka-Elvira Lindo? Akukhona ukuthi kuyindaba yokuthi ube semfashinini mayelana nabaphikisi bezingane kumanoveli azo zonke izethameli. Kungumbuzo wokuthi bobabili ngesikhathi sakhe u-Elvira no-Now Elisa, ngokusondela kwakhe ...
Kude Ekude, nguHernán Díaz
Kuhlala kukuhle njalo ukuhlangana nababhali abanesibindi, abakwazi ukwenza umsebenzi wokuxoxa izindaba ezahlukahlukene, kude kakhulu kwamalebula anezinhloli afana nokuthi "uyaphazamisa" noma "uyakha." UHernán Díaz wethula le noveli ngobusha obungenakuphikwa bomuntu obhala okuthile ngenxa yakhe, ngenhloso yokweqa ngokomzimba nangendlela, ehlela ngomlingo ...
Ikhasi1 Ikhasi2 ... Ikhasi4 Okulandelayo →